अमेरिकाबाट डा. केसीको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानमा एेक्यवद्धता – USNEPALNEWS.COM
अमेरिकाबाट डा. केसीको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानमा एेक्यवद्धता
by यूस नेपाल न्युज January 10, 2018
प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीको बिरुद्धमा अभिब्यक्ती दिएपछि पक्राउ परेका अभियन्ता डाक्टर गोबिन्द केसीको अभियानमा भ्रष्ट्राचार बिरुद्ध बिभिन्न अभियानहरु चलाउँदै आएको संस्था हेम सरिता पाठक फाउण्डेशनले पनि एेक्यवद्धता जनाएको छ । अमेरिकामा रहेर पनि नेपालको भ्रष्ट्राचार अन्त्यका लागि बिभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको फाउण्डेशनले सोमबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै डाक्टर केसीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग समेत गरेको छ ।
इरान मामिलामा ट्रम्पको यति चासो किन ?
by यूस नेपाल न्युज	 January 2, 2018
चीनको सैन्य सक्रियता देखेपछि भारतिय सेनाध्यक्ष नेपाल आउँदै
by यूस नेपाल न्युज	 March 27, 2017